Madaxweyne Trump oo soo hadal qaaday xaaladda ismari waaga ah ee ka taagan Maraykanka – Walaal24 Newss
January 9, 2019	1	By walaal24
Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlayo xaaladda ismari waaga ah ee ka taagan Maraykanka, tan iyo markii lagu guul daraystay in la ansixiyo miisaaniyadda dawladda ee sanadkan 2019-ka.
Trump waxa uu sheegay inuusan wali ka tanaasulin doonistiisa ku aadan in miisaaniyadda dawladda loogu daro in ka badan 5-bilyan oo Dollar si darbiga xadka Mexico loogu dhiso.
Waxa uu xusay in tahriibayaasha aan sharciga lahayn ee Maraykanka soo galay ay dalal iyo dhibaatooyin kale gaystaan, sidoo kalena dhawrkii bilood ee la soo dhaafay xadkaasi ay ka soo gudbeen 20-kun oo Carruur ah, taas oo ah mushkilad aan indhaha laga qarsan karin.
Dhanka kale Afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer oo ah hogaamiyaha Sanetrada xisbiga Demoqoraadiga ugu jira aqalka sare ee dalkaasi ayaa iyaguna qabtay shir jaraa’id waxaana ay sheegeen in aysan golayaasha sharci dajinta Maraykanku rabin in Maraykanka lagu xasuusto darbi dheer oo xadka laga talaabo, halkii lagu xasuusan lahaa Taalada xorriyadda.
Ra’iisul wasaare Ku-xigeenka Xukumada Federaalka Soomaaliya oo u anbabaxay Dalka Jordan
Mahamed Salah oo ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka Afrika ee CAF
Qoyskii Duqii hore ee Muqdisho oo booqasho ku tagay Xaruunta Gobolka Banaadir
Dhageyso: Taliska Booliiska Dhuusamareeb oo beeniyay in ay Ciidamo la waregeen Xaruumo ku yaala dhuusamreeb
Daawo: Xasan Daahir oo sheegay in Cabdiraxman Cabdishakuur wax walba beec ka yihiin dhuuni raac yahay